Home Wararka Gudaha Xog Xasaasi ah! Sarkaal ka tirsan NISA oo soo bandhigay xogta habkii...
Xog Xasaasi ah! Sarkaal ka tirsan NISA oo soo bandhigay xogta habkii ilaalada looga soo qaaday Fahad Yaasiin
Taliyaha dabagalka ee hey’adda NISA Col. Cabdullahi Daahir (Cabdullahi Dheere) oo kamid ah saraakiisha si aadka ah ula socda xuuraanka hey’adda, awood badana ku dhex leh ayaa war ka soo saaray wararka sheegaya in maalmihii lasoo dhaafay la weeraray guriga uu Muqdisho ka degan yahay Fahad Yaasiin.
Xog aruurin aan sameeyay kadib, waxaan u cadeynayaa umadda Soomaaliyeed in guriga Taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin aan la weerarin. Kaliya ciidankii ilaalada ka hayay guriga ayaa rabitaankooda ugu laabtay taliska dhexe ee nabad sugidda,” ayuu yiri Korneyl Cabdullahi Dheere.
Cid walba oo ku lug leh waa inay joojisaa been abuurka, waana in lala shaqeeyaa madaxweyne Xasan Sheekh oo aan la wadaagi doono dhaq dhaqaayada la xiriira amniga, isaga iyo Taliye Mahad Salaad oo shaqsi wax badan qaban kara ah,” ayuu markale yiri Taliye Cabdullahi Dheere.
Waa in madaxda cusub ee dhamaan hey’adaha amniga wax ka bartaan qaladaadkii ka dhacay dowladii hore mudadii shanta sano ahayd,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay korneylkan.
Previous articleUhuru Kenyatta ma ka qeyb-galaya cal eema saarka madaxweyne Xasan Sheekh (sii Aqri)
Next articleDaawo: Muxuu yahay heshiiska uu Duqa Muqdisho kusoo saxiixay Turkiga?
Suxufiyiin katirsan Reuters oo ku Dhaawacmay Severodonetsk halka uu dhintay wadaha...